BQ Aquaris X5 naseho tamin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny BQ Aquaris X5
Nihatsara ny BQ rehefa nandeha ny fotoana. Nanomboka tamin'ny alàlan'ny famoahana ireo terminal mora vidy eto amin'ny firenentsika, saingy tsikelikely no nahitantsika ny fivoaran'ny orinasa ho lasa tsaratsara kokoa. Raha ampitahaintsika ny terminal voalohany izay nalain'izy ireo niaraka tamin'ireo fantsona izay eny an-tsena ankehitriny, dia hitantsika ny fomba hikarakaran'ny orinasa bebe kokoa ny volavolany, ny fitaovana fanamboarana dia manana kalitao tsara kokoa, endrika tsara kokoa ary tsara indrindra amin'ny rehetra, izy ireo mitazona ny vidiny mora vaky alohan'ny fifaninanana.
Ity vidiny ity sy ny dokam-barotra malaza ary ny marketing am-bava dia nahatonga ny mpanamboatra Espaniola ho kandidà lehibe ho an'ny mpanjifa rehefa te hividy finday izy ireo. Androany, nanolotra ny vaovaony tamin'ny mpanao gazety ny orinasa, tao no nahafahantsika nahita fitaovana samihafa toy ny mpanonta 3D, takelaka vaovao na finday avo lenta vaovao, ny BQ Aquaris X5.
Ity terminal vaovao antonony ity dia misy famaranana tsara, toy ny vy, izay manome terminal premium ho azy. Izy io koa dia manampy ny fironana amin'ireo loko amidy indrindra izay lamaody be indrindra amin'izao fotoana izao amin'ny finday avo lenta, toy ny volondavenona volondavenona, volamena mainty ary raozy. Ny famolavolana ny fitaovana dia somary mampatsiahy ny iPhone 6s ankehitriny ary maro hafa raha mahita ny loko misy ny Aquaris X5 vaovao isika.
BQ Aquaris X5, terminal afovoany misy famaranana premium
Efa nolazainay izany, ny fitaovana dia miorina eo afovoan'ny Android noho ny toetrany izay ho hitantsika etsy ambany. Ny BQ Aquaris X5 vaovao, manana Efijery 5 inch miaraka amina vahaolana 1.280 x 720 teboka, tontonana IPS ary teknolojia Quantum Color. Ao anatiny, ilay tompon'andraikitra amin'ny famindrana ny finday iray manontolo dia processeur quad-core, ny Snapdragon 412, GPU Adreno 306 miaraka Fahatsiarovana RAM 2 na 3 GB, arakaraka ny fiovaovan'ny tahiry anatiny, izay ho 16 GB sy 32 GB, azo ovaina amin'ny alàlan'ny microSD.
Ao amin'ny sehatry ny sary dia ahitantsika fakan-tsary aoriana sy lehibe an'ny 13 Megapixels miaraka amin'ny sensor Sony IMX214 miaraka amina flash dual-tone sy fakan-tsary eo anoloana 5 MP misy flash. Ny baterinao dia hanana fahaizana 2.900 Mah izany dia tokony ho ampy hampialana antsika amin'ny andro amin'ny fampiasana mahazatra. Anisan'ireo fiasa hafa hanasongadinana fa hitantsika fa manana fifandraisana 4G, Bluetooth 4.1 LE, NFC na WiFi 802.11 a, b, g, n, ac ilay fitaovana.
Ny fitaovana dia ho hita amin'ny alàlan'ny BQ Online Store sy amin'ny fivarotana sy mpaninjara nahazo alalana ao noviembre. Raha ny vidiny dia miovaova arakaraka ny variant tadiavintsika, noho izany dia mahita ny tenantsika isika 229 € ho an'ny RAM 2 GB sy 16 GB variant fitehirizana anatiny, 249 € ho an'ny kinova misy RAM 2 GB sy fahaiza-manao 32 GB ary farany, ny variant an'ny 3 GB RAM ary 32 GB ny memoara anatiny dia ho lafo 269 €.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Bq » Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny BQ Aquaris X5
8K mampiseho, ny vahaolana manaraka ho an'ny smartphone sy ny takelaka